Enwere m ike na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ m dị ka onye ọrụ nyochaa njikarịcha nke oge a?
Dị ka ụlọ ọrụ ọ bụla, ụwa nke oge a nke SEO nwere ọnọdụ na mmetụta ya. N'ezie, onye ọ bụla ọkachamara nyochaa njirimara na-achọpụta ha niile, dịka ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ na-eji ụbọchị ọ bụla na-arụ ọrụ n'otu ihe - otu esi enweta ọkwa ka mma, ịtụle ọtụtụ (ọ bụrụ na ọ bụghị otu narị otu narị) nke ihe dị iche iche. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-emetụta mmetụta ndị na-eweta site n'ịga n'ihu na-eme ka evolushọn nke isi nyocha nke Google nyocha algorithm.
Ekwenyere m na enwere mgbe ụfọdụ ihe ụfọdụ ma ọ bụ atụmatụ SEO ọdịnala iji mee ka ọ dị mma. Na onye ọ bụla ị bụ - onye nwe ụlọ ọrụ nwe ụlọ na-enwe mmetụta nke enweghị nkà ọkachamara, maọbụ onye na-elekọta kọmputa ọ bụla dị njikere na njikere iji nweta ụfọdụ omume nke ọ bụla nyochaa njirimara search engine optimization provider. N'okpuru ebe a, m ga - egosi gị ụfọdụ atụmatụ ọrụ ndị a na - ahụkarị n'etiti obodo SEO nke oge a, ma ndị na - anụ ọkụ n'obi na ụlọ ọrụ na - arụ ọrụ na -. Ya mere, ka anyi malite.
Akarala ndị snippets dị iche iche amaralarị nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkachamara nyochaa njirimara search engine dị ka azịza nchịkọta azaghachi na njuju, nke a na-ahụkarị na SERPs. Ọtụtụ mgbe, ị nwere ike ịhụ otu ntinye ederede ahapụtara na peeji nke ga-enye onye ọrụ ọ bụla otu ihe ngosi nghọta (na-adịkarị ka usoro atụmatụ mmemme). N'iburu n'uche na ihe ndị dị otú ahụ bara uru ma na-ewu ewu, ka anyị gbalịa ịghọta ihe ha maara ma jiri ya mee ihe. N'eziokwu, Google na-enweta snippets site na ntanetị weebụ nke na-enye nkọwa zuru ezu ma ka dị mkpụmkpụ nzaghachi nye otu n'ime arịrịọ ndị a na-achọkarị n'oge a n'etiti ndị ọrụ.
Na-eche na snippets na-apụta n'ihe dị ka pasent 30 nke ajụjụ gbara ajụjụ ma na-eme ihe dị ka backlinks, nke ahụ ga-abụ echiche magburu onwe ya maka ọdịnaya weebụ gị ka ejiri ụfọdụ ndepụta nke okwu mpempe akwụkwọ tinye akwụkwọ, nke kwesịrị Na-azaghachi naanị ajụjụ ndị dị mkpa ma dị mma. Ihe niile ị chọrọ bụ itinye oge iji nyochaa ajụjụ ndị onye na-ege gị ntị nwere ike ịjụ, wee gbalịa dee azịza kasị mma. Ime otú ahụ, ị ​​ga-enwe ohere dị mma ka ị na-agwa ndị ahịa gị mgbe ụfọdụ.
peeji nke enyi na enyi
Ihe dị ka afọ abụọ gara aga, Google ebutewo ụzọ mbụ ọ na-ebute ụzọ na mbụ na algorithm.Ka oge na-aga, ihe kacha mkpa ka obere ngwaọrụ wee ghọọ ihe dị mma ị kwesịrị ilezi anya nakwa n'ihi na ugbu a, nchịkọta ọchụchọ na-arụ ọrụ ugbu a site na njirimara onye ọrụ, karịsịa mgbe ị na-eme nchọgharị site na smartphones na mbadamba. Iji mee ka mpempe akwụkwọ na-ebugharị ngwa ngwa, Google esitere na teknụzụ AMP ọhụrụ. Nke ahụ pụtara na agbụrụ nke elu ọkwa ga-achọ ka ebe nrụọrụ weebụ gị ga-adịrịrị na-akpụ akpụ ụzọ iji nweta nsụgharị nzagharị abụọ.Ma, ugbu a, ana m atụ aro ka ị mara ihe ọhụrụ a. Ị nwere ike ịnwa ngwa ngwa otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ na-emekarị ihe ntanetị.
Ọdịnihu ga-abịarute anyị, anyị kwesịkwara ime mgbanwe. Ana m ekwu na ugbu a, mkpu olu ka na-enyefe kama ntakịrị ọnụ ọgụgụ ọchụchọ. Ma enwere m n'aka na ọ dị anyị mkpa ịdị na-eme dịka onye ọ bụla na-achọpụta njirimara search engine, dị ka nchọpụta olu ji nwayọọ nwayọọ na-aghọwanye ndị ọzọ, nke ndị isi IT na-etinye ego na-etinye ego dị ukwuu ka ha wee mechaa mepee emepụta Voice search na ịkwanye n'ụzọ zuru ezu eme ka ndị mmadụ nwee nkà na ụzụ.
Ya mere, gịnị ka anyị nwere ike ime maka ya? Ma ugbua, enweghi azịza ngwa ngwa, ya mere enwere m ike ikwu maka omumu omumu na iche echiche banyere nsogbu ndi siri ike nke anyi puru iche anya n'egbughị anya, ikekwe Source .